दुनियाँ लकडाउनमा बन्द, चीनले बनाउँदैछ विश्वकै ठूलो फुटबल स्टेडियम – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/दुनियाँ लकडाउनमा बन्द, चीनले बनाउँदैछ विश्वकै ठूलो फुटबल स्टेडियम
दुनियाँ लकडाउनमा बन्द, चीनले बनाउँदैछ विश्वकै ठूलो फुटबल स्टेडियम
काठमाडौं, बैशाख ९। विश्वभरका मानिसहरू कोरोना भाइरसको महामारीले हैरानीमा परेको बेला चीनले के गर्दैछ होला?
शुरुमा जहाँबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो, त्यहीँ देशले यसको उत्कर्ष भोगेर सामान्य जनजीवनमा फर्किसकेको चीनमा भइरहेका ठूला ठूला आयोजनाहरुको निर्माण कार्यले देखाउँछ।
चीनले अहिले आफ्ना ठूला परियोजनाहरूमा काम गर्न शुरु गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले लेख्न थालेका छन्। चीनले अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल स्टेडियमको निर्माण सुरु गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ।
कमलको फूल आकारको यो स्टेडियम हेर्दै निकै आकर्षक र भव्य देखिनेछ। प्रोफेशनल क्लब ग्वांगझू एवरग्रांडेले यो स्टेडियम निर्माण गर्दैछ। यो स्टेडियम बनाउन १३ हजार करोड रूपैयाँ खर्च हुनेछ। यो स्टेडियममा एकैपटक १ लाख मानिसहरु बसेर म्याच हेर्न सक्नेछन्।
स्टेडियममा खेलको कभरेजको लागि ठाउँ ठाउँमा मिडिया क्षेत्र र प्रेस कक्ष तयार बनाइने बताइएको छ। साथै अति विशिष्ट र विशिष्ट अतिथिहरुका लागि छुट्टै कोठाहरु, खेलाडीका लागि तयारी स्थल लगायत सबै सुविधाका साथ स्टेडियमको काम धमाधम शुरु गरिएको छ। निर्माणकर्ताहरुका अनुसार यो स्टेडियम २०२२ सम्म बनाइसक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
चिनियाँ र नेकपाबीचको भिडियो कन्फरेन्स विवादमा
मरुभूमिबाट दाईले नेपाली सेनामा कार्यरत भाईलाई पठाए यस्तो मनै रु’वाउने पत्र, ‘म नेपाल आमा रो’एको हेर्न सक्दिन….
ठूलो तारा एकाएक गायब भएपछि खगोलशास्त्रीहरु चकित, खोज्दैछन् कारण !
पैसा सकिए पनि इन्टरनेट नकाट्न प्राधिकरणको निर्देशन
सुटकेशमा भेटिएको शवको पहिचान खुल्यो